Ungalikhombisa Kanjani Iphesenti Lebhethri ku-iPhone 12? - Amagajethi
Uma ubusebenzisa uchungechunge olusha lwe-iPhone 12, kufanele ukuthi uqaphele ukuthi isithonjana sebhethri asibonisi iphesenti eliqondile lebhethri elisele. Kumamodeli wangaphambilini we-iPhone, iphesenti lebhethri elisele lingabonakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla kanye nesithonjana sebhethri. Ngakho-ke namuhla sizobheka ukuthi singawabonisa kanjani amaphesenti ebhethri ku-iPhone 12.
Noma uchungechunge olusha lwe-iPhone 12 lunezincazelo ezinhle kakhulu ze-iPhone, i-Apple yenze izinguquko kweminye imisebenzi eyisisekelo yefoni. Lesi sibuyekezo esisha esenziwe yi-Apple nakanjani siyacasula njengoba ukuhlola amaphesenti ebhethri njalo kuwumkhuba kwabaningi. Yize isimo sebhethri singabonakala, asifani nephesenti. Ukushintsha izilungiselelo akusizi kulokhu. Kunezinye izindlela ezimbalwa kule nkinga. Kepha ukukuxwayisa phambili, amaphesenti ebhethri awakwazi ukukhonjiswa kubha yomumo. Esikhundleni salokho, kunezinye izinketho ongaphendukela kuzo.
Eminye Imihlahlandlela ye-iPhone 12:
Izindlela Ezihlukile Zokukhombisa Amaphesenti Webhethri ku-iPhone 12, Mini & Pro Max:
1. Izinyathelo Zokuhlola ibhethri nge-Control Center
Inketho efinyeleleka kalula yokuhlola ibhethri esele ngaphandle kokubuyela esikrinini sasekhaya yi-Control Center. Kubantu abaqhubeka nokuhlola ibhethri lefoni yabo, ukuvula i-Control Center kuyindlela engcono kakhulu
Swayiphela phansi usuka ekhoneni eliphezulu kwesokudla se-iPhone yakho.
Lapho isikhungo sokulawula sivula ungabona amaphesenti ebhethri phezulu ngakwesokudla kanye nezinye izimpawu.
Uma ufuna ukwenza ukufinyelela ku-Control Center, ngisho nangaphezulu, kube lula noma uzizwe uthanda ukuskrolela phansi njalo lapho udinga ukubheka isikhathi ukuthi sinzima, ungangeza ukuthinta kumenyu yezilungiselelo ukuze i-Control Center ivule ngokuthinta okulula .
Iya kumenyu yezilungiselelo, skrolela phansi ku-Ukufinyeleleka bese uya kunketho ye-'Touch '
Ngezansi, kukhona inketho ebizwa ngokuthi 'i-Back Top'. Thepha kulokho
Manje usungasetha isenzo njengo-'Thepha kabili 'noma' Thepha kathathu '
Khetha noma iyiphi inketho oyifunayo
Ngokusetha isenzo esisha, ungavula Isikhungo Sokulawula nge-'Thepha kabili 'noma kunini lapho ufuna ukuhlola iphesenti lebhethri noma okunye okunye. Lesi senzo asidingi ukutholakala kuphela kusuka kusikrini sasekhaya. Noma nini lapho uthepha kabili, Isikhungo Sokulawula sizovela.
2. Cela Usizo KuSiri
USiri, umsizi wakho ongokoqobo angaba usizo kuwe ngokushesha. Setha inketho ye-'Lalela i-Hey Siri 'kumenyu yezilungiselelo uma ungafuni ukucindezela inkinobho eseceleni njalo uma ukhuluma noSiri. Ngakho-ke izinyathelo zokucela uSiri ukuthi ahlole amaphesenti ebhethri asele
Cindezela u-d bamba inkinobho eseceleni ukwenza kusebenze iSiri bese ucela ukubheka ibhethri elisele
Ithi 'Hey Siri' ukuze wenze kusebenze iSiri bese uhlola amaphesenti ebhethri
Njengoba ilula futhi ilula njengoba ibonakala, le nketho ayizifanele zonke izimo. Ukwenza kusebenze iSiri ngaso sonke isikhathi lapho ufuna ukuhlola isikhathi akuyona inketho engcono kakhulu.
3. Ngewijethi yesikrini sasekhaya
Uma ufuna ukwazi amaphesenti ebhetri yakho ngokushesha nje lapho uvula i-iPhone yakho, okungcono kakhulu kuwe ukufaka iwijethi yesikrini sasekhaya. Futhi ngesibuyekezo esisha se-iOS 14, ungakhetha phakathi kosayizi bewijethi abathathu ngokuya ngokuthanda kwakho. Uma ungathandi iwijethi enkulu ethatha isikrini sakho sasekhaya sonke, ungaba newijethi encane. Lezi zinketho bezingatholakali ngaphambi kokuvuselelwa kwe-iOS 14.
Iwijethi yebhethri ilula kakhulu futhi ikhombisa iphesenti lebhethri le-iPhone yakho namanye amadivayisi axhunywe kuyo. Ungangeza iwijethi yebhethri ngezinyathelo ezimbalwa ezilula.
Izinyathelo zokwengeza iwijethi yebhethri yesikrini sasekhaya yilezi:
Iya esikrinini sakho sasekhaya bese ucindezela isikhathi eside kunoma iziphi izinhlelo zokusebenza noma esikhaleni esingenalutho
Lapho izinhlelo zokusebenza zisesimweni sokuhleleka ungabona inketho yohlelo lokusebenza lokususa
Ekhoneni eliphezulu kwesokunxele, ungabona uphawu +. Thepha kulokho ukuze ungeze noma iyiphi iwijethi
Manje imenyu yewijethi izovuleka. Skrolela phansi ukuthola iwijethi yebhethri
Ngemuva kokukhetha iwijethi, kuzoboniswa kuqala iwijethi futhi ungakhetha noma yisiphi isayizi sewijethi oyifunayo
Ngemuva kokukhetha iwijethi kobunye bosayizi abathathu, ungangeza iwijethi kusikrini sasekhaya
Iwijethi yebhethri izokhonjiswa esikrinini sakho sasekhaya njalo uma uvula i-iPhone yakho. Kepha ungazizwa ukuthi akuhambisani nokwengeza iwijethi kusikrini sasekhaya. Uma ungafuni ukugcwalisa isikrini sasekhaya ngewijethi yebhethri ungasifaka kukholomu ye-'Namuhla Yokubuka '. Ingangezwa ngokuthi,
Swayiphela ngakwesokunxele ukuze uvule imenyu ye-‘Namuhla yokubuka ’
Cindezela isikhathi eside bese ubamba kunoma iyiphi indawo engenalutho
Lapho imenyu ihlelwa, chofoza uphawu + ekhoneni eliphezulu kwesokunxele
Manje usungangeza iwijethi yebhethri kokuthi 'Ukubuka kwanamuhla'
Iwijethi ingahanjiswa kusikrini sasekhaya ukuyilungisa nomaphi lapho ufuna khona. Kepha usayizi wewijethi awunakuguqulwa njengoba ufuna ngaphandle kwezinketho ezi-3 ezitholakalayo. Kunezinhlelo zokusebenza ezithile zangaphandle ezingasetshenziswa ukubonisa amaphesenti ebhethri ngaphandle kwezinketho ezingaphakathi kwefoni. Lezi zinhlelo zokusebenza ziyatholakala ku-App Store.
I-iPhone 12 ingenye yezingcingo ezivelele kakhulu uma iqhathaniswa namamodeli ayo wangaphambilini namanye amafoni emakethe. Impela, ukuvuselelwa okusha kwesimo sebhethri kuyinkinga kancane. Kepha kunezinketho ezimbalwa ezishiwo ngenhla ongazisebenzisa njengenye indlela. Futhi lapho uxhuma ifoni yakho kwishaja, kuzokhonjiswa amaphesenti ebhethri. Ngaphandle kwalena ayikho enye indlela yokuhlola ibhethri. Awukwazi ukwenza amaphesenti ebhethri kubha yomumo noma yini oyenzayo. Ngakho-ke inketho engcono kakhulu ukusebenzisa enye yezindlela ezichazwe ngenhla.
I-xbox bukhoma amakhodi womdlalo aku-inthanethi
amawebhusayithi amahle kakhulu wokubuka ama-movie
i-emulator ye-android yamawindi ayi-10 pc
landa i-movie efonini mahhala
itunes for windows 10 ukulanda